Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်)
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Dextroseအားသင် အရည်မသောက်နိုင်တော့သည့်အခါ သို့မဟုတ် အရည်များပိုလိုအပ်သည့်အခါတွက် သကြားပမာဏအမျိုးမျိုးပါဝင်သော အရည်များကိုပေးနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ တခြားသောထိုဆေးများနှင့်လည်းဖျော်စပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသေးသည်။ Dextroseသည် ပိုးသန့်စင်သောဆေးရည်ဖြစ်ပြီးအကြောထဲသို့ ထိုးသုံးရပါသည်။
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Dextroseအား ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသလိုသုံးစွဲပါ။ တိကျသောဆေးပမာဏအညွှန်းအတွက် ဆေးတွင်ပါသောလေဘယ်များကိုသေချာဖတ်ပါ။ Dextroseကိုများသောအားဖြင့် ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ထိုးဆေးအဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်။ Dextroseအားအိမ်၌အသုံးပြုမည်ဆိုပါကသင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူမှ သင်ပေးလိုက်သည့်အတိုင်းထိုးရမည့်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလိုက်နာပါ။
ဤဆေးအားဆေးထိုးအပ်များနှင့်အတူကလေးများအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမမှီနိုင်သည့်နေရာတွင် ထားပါ။ ဆေးထိုးပြွန် ဆေးထိုးအပ်နှင့် တခြားပစ္စည်များကို ပြန်မသုံးပါနှင့်။ သင်၏ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားသင့်တော့်သည့် စွန့်ပစ်ပုံကိုမေးပါ။
Dextroseအရည်တွင် အမှုန်များသို့ အရောင်များပါနေလျှင် သို့မဟုတ် ပုလင်းကွဲအက်နေလျှင် သို့ တနည်းနည်းဖြင့် ပျက်စီးနေလျှင် မသုံးပါနှင့်။
သွေးသွင်းရမည်ဆိုလျှင် ဆေးကိုတစ်ချိန်တည်း IV set တစ်ခုတည်းမသုံးရပါ။
Dextroseသုံးရန် တစ်ကြိမ်လွတ်သွားပါကသင်၏ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
Dextroseအသုံးပြုပုံနှင့်ပါတ်သတ်၍ မေးစရာများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Dextroseကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Dextroseကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Dextroseဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။)
Dextroseအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချတာမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကိုမလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့်အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ရာအရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Dextroseအားရေခဲသေတ္တာထဲ၌ သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်သောကြောင့် အေးခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
တစ်ချို့သောကျန်းမာရေးအခြေအနေများသည် Dextrose နှင့် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်၏။ သင့်၌ဖြစ်ပွားနေသောအခြေအနေများကို ဆရာဝန် သို့ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားပြောပြပါ။ အထူးသဖြင့် –
• ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင် သို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နို့တိုက်ရန် အစီအစဉ်ရှိလျှင်
• ဆရာဝန်ညွှန်သည့်ဆေး၊ မညွှန်ပဲသောက်နေသည့်ဆေးများ၊ အပင်ထွက်ပရဆေးများသို့ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများသုံးနေလျှင်
• ဆေးများအစာများနှင့် တခြားအရာများနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်
• ကိုမာဝင်နေလျှင် (ဆီးချို သို့ အသည်းနောက်ဆက်တွဲကြောင့်)
• ကယောင်းကတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာသို့ ခေါင်းတွင်းသွေးယိုခြင်းသို့မဟုတ် ကျောရိုးမအတွင်းသွေးယိုခြင်း
• သွေးတွင်း၌ galactoseလယ်ဗယ်မြင့်တက်နေခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် Cရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။]
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကိုမသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးအားလုံးသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်၏။ သို့သော် လူအများတွင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်ခြင်းသို့ အနည်းငယ်သာဖြစ်နိုင်သည်။ အောက်ပါ အဖြစ်များဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတောက်လျှောက်ဖြစ်နေလျှင် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
• ဆီးအသွားများခြင်း၊ ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် နာခြင်း၊ နီခြင်းသို့ ဖူးယောင်ခြင်း။
• ပြင်းထန်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများခံစားရပါကအရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူပါ။
• ပြင်းထန်သည့် ဓါတ်မတည့်မှု (အကွက်ထခြင်း၊ အင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ခြင်း၊ ရင်ကြပ်ခြင်း၊ ပါးစပ် မျက်နျာ နှုတ်ခမ်း လျှာတို့တွင် ဖူးယောင်ခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများလှုပ်ခြင်း၊ လက်ခြေများရောင်ခြင်း၊ အားနည်းခြင်း။
ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအားခံစားရမှုမှာတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါသည်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်သည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါကသင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။)
ဘယ်ဆေးတွေက Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dextrose သည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့်တခြားသော ဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သော ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံး၏စာရင်းကိုပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်သည့်အခါ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများ အားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနှင့်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Dextroseက အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Dextrose သည် သင်၏ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီး၏။ အထူးသဖြင့်
• လက် ခြေ ခြေဖဝါးတို့တွင် ဖောရောင်ခြင်း
• Pulmonary Edema (အဆုတ်တွင်ရေဝင်ခြင်း) – သတိနှင့်သုံးပါ။ အခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
လုူကြီး ။ ။ ၁၀ -၂၀ gသောက်ဆေးတစ်ကြိမ်; လိုအပ်လျှင် ၁၀ မိနစ်အတွင်းထပ်သောက်နိုင်ပါတယ်။
လူကြီး ။ ။ ၁၀-၂၅ g အကြောဆေး (၄၀-၁၀၀ ml of ၂၅% ဆေးရည်သို့၂၀-၅၀ ml of ၅၀% ဆေးရည်). ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါအခြေအနေတွေမှာတော့ ထပ်ထိုးရနိုင်ပါတယ်။
လူကြီး ။ ။ ၂၅-၅၀ g ကိုပုံမှန် အင်ဆူလင် ၁၀ units နှင့်ပေါင်းပြီးမိနစ် ၃၀-၆၀ ထိပေးရပါမယ်,လိုအပ်လျှင် ထပ်ပေးရပါမယ်။ နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့၂၅ gဆေးရည်ကိုပုံမှန် အင်ဆူလင် ၅-၁၀ units နှင့်ပေါင်းပြီး ၅ မိနစ်ကြာအောင် သွင်းရပါမယ်။ လိုအပ်လျှင် ထပ်ပေးရနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေး ။ ။ ၂ နှစ်အထက်။ ။ 10-20 g orally as single dose; may repeat in 10 min if needed.
ကလေး။ ။ ၆ လအောက်: 0.25-0.5 g/kg/dose intravenously; greater than6month: 0.5-1 g/kg/dose. Doses may be repeated in severe cases. Max: 25 g/dose.
ကလေးနှင့် မွေးကင်းစ။ ။ 0.5-1 g/kg intravenously (using 25% or 50% solution) combined with regular insulin (1 unit for every 4-5 g dextrose given); infuse over2hr, may repeat if necessary.
Dextrose (ဒက်စ်ထရိုစ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Dextroseကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
olution, intravenous: 5%, 10%, 20%, 40%
Dextrose ကိုသုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင် သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 8, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဩဂုတ် 14, 2017